Mauricio Pochettino Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ugu
Tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa magacaabay saddexda AxadleTM ee waqtigan ugu fiican horyaalka Premier League, kuwaas oo ah xiddigaha ay tahay inuu kasoo dhex baxo ciyaartoyga la siinayo abaal-marinta PFA.
Waraysi taxane ah oo uu Mauricio Pochettino bixiyey toddobaadkii tegay dhamaadkiisa, ayaa waxa laga weydiiyey su’aal xaasaasi ah oo la xidhiidha ciyaartoyda horyaalka Premier League waqtigan ka dheesha, iyadoo laga dalbaday inuu soo xulo saddexda AxadleTM ee uu shaqsi ahaan rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu fiican xilligan.
Saddexdan AxadleTM oo lagu daray Mohamed Salah ayaa waxay Liverpool u horseedeen inay 25 dhibcood ku qabato hoggaanka Premier League oo ay laba guulood oo kali ahi uga hadhsan yihiin inay soo afjarto abaartii soddonka sannadood ka haysatay hanashada horyaalka oo ay ugu dambaysay 1990-kii.
Mohamed Salah, Jamie Vardy iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo lagu daray Mane oo ah kuwa goolasha ugu badan ka dhaliyey Premier League ee ay kabta dahabka ah u dhaxayso illaa hadda ayaa uu soo hadal=qaadi waayey markii la su’aalay inuu lasoo baxo saddexda AxadleTM ee ugu fiican.
Si kastab, miyey akhriste kula tahay in xulashada Pochettino ay tahay kuwii saxda ahaa, miyaad se rumaysan tahay in saddexdan ciyaartoy ay u qalmaan in midkood la siiyo abaal-marinta xiddiga sannadka? Fikirkaaga kaga dhiibo halka hoose ee falcelinta, adiga oo soo dooranaya saddexda AxadleTM ee fikir ahaantaada ay ugu fiican yihiin horyaalka Premier League waqtigan.